राष्ट्रका दुश्मन माफिया र बिचौलिया हुन् | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / राष्ट्रका दुश्मन माफिया र बिचौलिया हुन्
Posted by: युगबोध in विचार June 28, 2019	0 27 Views
नेपाल सुन्दर भए पनि, प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न भए पनि स्वतन्त्रताका जतिसुकै संघर्ष आन्दोलन युद्ध भए पनि नेपाल नामको जन्मदेखि हालसम्म आइपुग्दा आफ्नै मौलिकतामा सञ्चालन हुन सकेन। नेपाल दुई ठूला विशाल राष्ट्रका बीच उकुसमुकुस हु“दै सिमाहरु मिचिए पनि मौलिकतामा हस्तक्षेप भए पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सकेन। यसका प्रमुख कारण नेपालका राजनेता भन्नेहरु नै हुन्। त्यसैको परिणाम कहिले त प्रजातान्त्रिक विचार हावी हुन्छन्। कहिले त वामपन्थी नाम हावी हुन्छन्। संघर्षबाट हजारौं सहिद बनाएपछि सत्तामा पुग्दा बित्तिकै दुई राष्ट्रका निमन्त्रणा ओइरिन थाल्छन्। सत्ता प्रमुख उत्तर लाग्दा दक्षिणमा नाकाबन्दीका सास्ती भोग्नुपर्छ। सीमामा बस्ने विचरा लाटासोझा इमानदार गरिव नेपालीहरुको महाविपत्ति हुने गर्छ। नेतृत्व दक्षिण लाग्यो भने उत्तरको योजना भिन्न भएर जान्छन्। राष्ट्रले ठूला–ठूला विपत्ति भोग्नुपर्दा तिनै देशका विविध योजनाका माफिया बिचौलियाहरु प्रयोग गरिन्छन्। त्यस्ता माफिया र बिचौलियाका कारण नेपाल कहिल्यै शान्त, स्वतन्त्र भएर रमाउन पाएन। देशका राम्रा बुद्धिमान, हिम्मतवाला व्यक्तित्वहरु नेपालले उपयोग गर्न पाएन कुनै न कुनै बहानामा कुनै पनि राष्ट्रमा पुग्छन्। तिनीहरु नेपाली हुन्, नेपालको नागरिकता छ। तर भएर के गर्ने ? जसको जुठोपुरो खान्छन् उनैका इमानदार सिपाही बन्छन्, उनैका दलाल बन्छन्, उनैका गुणगान गाउछन्।
नेपालमा हालसम्म देखिएका समस्याहरु अमेरिकाले डिभी पार्न लगाएर दक्ष जनशक्ति लैजान्छ अन्य राष्ट्रले रोजगारको लागि भनेर भिसा मार्फत लान्छन्, लगेका दक्ष विद्वान बलवान जस्ता सुकै भए पनि महिला प्राय कोठीमा घर धन्दामा पाहुनाको स्वागतमा समग्रमा भन्नुपर्दा च्यानल गेटभित्र उपयोगमा राखिन्छ। हजारौं चेलीबेटी बच्चा जन्माउने कारखानामा कैदछन्। कोही अपवादको रुपमा नेपाल छिरेका पनि मुिस्लमको घुम्टो ओढेर धर्म परिवर्तन गरेर सायद उनैका कुकृत्य बोकेर आउ“छन्। घर समाज परिवारबाट जेपनि हुन सक्ने हुन्छ भने पुरुषहरुबाट हप्कीखपकी आपत्ति विपत्ति मार पिट उस्तै परे ज्यानसम्म गुम्न सक्छ। त्यहा“ पनि दलाली माफिया बिचौलिया छन्। आफ्नैले आफ्नैलाई विश्वासघात गर्छन्। अरु देशमा पढ्न नसकेका केही गर्न नसक्ने कुनै न कुनै बहानामा दुई नं. धन्दामा सक्रिय बन्छन्। तिनीहरु प्राय भू–माफिया, शैक्षिक माफिया, लागूऔषध दुव्र्यसनी, मानव वेचविखन दलाली, बिचौलिया, चाकरीवाज, भ्रष्टाचारी, ठग, लुटाहा, चोर, डा“का, हत्यारा, ग“जेडी जड्याहा, जुवाडे, गुण्डा, विनाभिसा चोर्ता बाटो विदेश मान्छे बेच्ने, नेपालका अमूल्य सम्पत्ति बहिरागमन गर्ने नक्कली सामान नक्कली पैसा नक्कली प्रमाणपत्र बेचबिखन, काठ तस्कर, जीवजन्तु तस्करजस्ता धन्दामा लिप्त हुन्छन्। त्यस्ता अपराधी मनस्थिति बोकेकाहरुले समाजमा कहिल्यै राम्रो काम गर्न दिदैनन्। त्यस्ता अपराधी जुनसुकै क्षेत्रमा भाइरसको रुपमा घुसेर सिंगो समाज बदनाम र बेकम्मा बनाइ दिन्छन्।
उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सम्पदा कसरी बन्छन् व्यक्तिका ? सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा नामसारी हु“दासम्म राज्यले थाहा नपाउनु विडम्बना हो कि होइन ? एउटा मान्छेको हत्यारा पत्तै लगाउन नसक्नु दुःखद पक्ष हो कि होइन ? बन्यजन्तु चोरी निकासी हुदासम्म थाहा नहुनु के हो ? हजारौं चेलीबेली कोठीमा कसरी पुगे ? बैंकको रकम एउटाको अर्काले चेकद्वारा कसरी निस्कन्छ ? चोर्ता गाडीको थुप्रो कसरी आइपुगे ? सडेको डेट अफ औषधि, मिसावट खाद्यान्न बजारमा खुला बिक्रीमा छन् त्यो के हो ? मालपोतमा जात्रा किन हुन्छ ? अरबौं राजस्व ठगी कसरी हुन्छ ? जुन चिज जुन क्षेत्र पवित्र भएन भने सिंगो राष्ट्र समाजलाई प्रभावित पार्छ। जुन वस्तुले समृद्धशाली बनाउनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ। राष्ट्रको छवि उ“चो पार्छ त्यही क्षेत्र जोखिममा छ। त्यसका रुप के हुन् ?
सर्वप्रथम नक्कली प्रमाणपत्रधारी कसरी शिक्षा क्षेत्र अन्य क्षेत्रमा शिक्षा आयोगबाटै लोकसेवाबाटै कसरी प्रवेश गरे र कहिलेकाही नक्कली प्रमाणपत्रधारी अख्तियारले पकड्यो भन्ने सुन्नमा आउ“छ ? त्यो के हो ? कसबाट त्यस्तो बन्यो ? अर्को पक्ष अनुमति बिनाका झोले विद्यालयको जन्म कसरी भयो ? त्यसलाई जन्माउने जन्मदाता को हुन् ? स्कूल खोल्नका लागि आवश्यक कागजात, आवश्यक सिफारिस, आवश्यक अनुमति कम्तिमा पा“च÷सात निकायका सम्बन्धितले हस्ताक्षर नगरी स्कूल खोल्न पाइ“दैन, ती प्रक्रिया कसरी बने ?
एउटा स्कूल खोल्नका लागि कुन–कुन मापदण्ड चाहिन्छन् ? कति दुरी चाहिन्छ ? हाल एउटा सटरमा सामुदायिक अर्को सटरमा संस्थागत स्कूल कसरी खुले ? किन खुले ? कसले खुलायो ? निरीक्षण अनुगमन सिफारिस कसले गरेर निर्णयमा पुग्यौं ? संस्थागत विद्यालय राम्रा कसरी बने ? छोटो समयमा .एउटा व्यक्तिले सयौं गगनचुम्बी दरवार सयौ गाडी कसरी कुम्लाउन सफल भए ? तिनलाई साथ दिने तिनका शिक्षालयमा अतिथि भएर भव्य सम्मानित हुने को को हुन् ? त्यस्ता विद्यालयलाई शुल्क निर्धारणको अथवा राज्यको कानुनको दायरामा ल्याउने जिम्मा क कसको हो ? मन्टेश्वरीको नाममा नेपाली जनतालाई मुन्टेश्वरी बनाउ“दासम्म निकायले थाहा नपाउने नर्सरीका बच्चाको मासिक हजारौं शुल्क लिदासम्म मूकदर्शक बन्ने को हो ? विद्यालय शिक्षक प्रअको कारण बिग्रे भन्ने विद्यार्थी थुप्रो खोज्ने मर्ज गराउने सुझाव दिने त्यसबाट फाइदा कसलाई हुन्छ ? राष्ट्रकै ठूलो दर्जामा पर्ने पुरानो भाषामा आइरन गेट मानिने पुरानो क्।ी।ऋ। हालको क्भ्भ् भनिनेका प्रश्नपत्र बाहिराउने त्यत्ति ठूलो जघन्य राष्ट्रघाती गिरोहका नाइके को हुन् ? २० प्रकारका शैक्षिक मजदुर बनाएर विद्यालयमै किचलो शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तर संघर्ष आन्दोलन चक्काजाम बन्द हड्ताल विचरा अन्जान साना बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाड गराउने गिरोह को हो ?
कुनै पनि परीक्षाको समिति निर्माण प्रश्नपत्र निर्माण, छपाई अति गोप्य आफ्नो जिल्ला भन्दा बाहिर लगेर बनाइएका एउटै समितिलाई पनि क ख ग वर्गमा बा“डेर आफ्नै निर्मित समितिलाई समेत जानकारी नपाउने गरी लाखौं खर्चेर कार्यालय समयमा दोहोरो भत्ता लिन नपाउने इमानदार व्यक्तित्वलाई विदाको समयमा सा“झ बिहानको समय देखाएर मामाको धन फुपुको श्राद्ध बनाएर नतिजा प्रकाशन गर्दा हजारौं असफल भए भनेर पुनः उस्तै उत्ति धनरासी खर्चेर जाने नीति कहाबाट आयो ? इमानदार जिम्मेवार आफ्नै छवि कमाएका राष्ट्रसेवक जनसेवकहरुलाई यस्तो चंगुलमा फसाइदिने योजनाकार को हुन् ?
हाल दाङ जिल्लामा प्रावितर्फ ११९४ दरबन्दीमा+गरी प्राशिपका दरबन्दी बने भनेर १२४० को हिसावमा गनेर नियुक्त दिलाएर पनि कमाइ गर्ने हाल ती दरबन्दी होइनन् भनेर जागिर खोस्न लगाउने त्यत्तिबेलाको १२४० को दरबन्दी कामय गरिएको सम्बन्धित निकायको पत्र गायव पारेर अन्यौलग्रस्त बनाएर शैक्षिक मजदुरको अपमान सास्ती दिने गिरोह खोई ?
यी र यस्ता उदाहरण दर्जनौ छन्। त्यसकारण देश माफियाले बिचौलियाले ध्वस्त पार्न थाले। जुनसुकै क्षेत्रमा यस्ता अपराधी भाइरसको रुपमा छन्। कही कतै अछुतो छैन। काम गर्ने इमानदार कर्तव्यनिष्ठको सोच लिएर प्रवेश भएका राष्ट्रसेवक जनसेवक यस्तै माफियाको चंगुलमा फसेर सही निर्णयमा पुग्न सकेनन्। सा“च्चैका इमानदार राष्ट्रसेवक सोच लिनु भएकाहरुले आफ्नो कमिटी निकटको सहयोगी घर परिवार अंगरक्षक अति विश्वासका पात्र अति नजिक बनेर प्रशंसा गर्ने सबैमा छानविन गर्नुस्। वर्तमान शिक्षा क्षेत्र विगार्नमा शैक्षिक मजदुर प्रअ मात्र होइनन्। आवेसमा होइन चिसो दिमागले सोच्नुहोस्। पत्ता लगाउनुहोस् राष्ट्रका संरचना बर्बाद नपार्नुहोस्, प्रयोगमा ल्याउनुहोस्। शिक्षा क्षेत्रका शैक्षिक माफिया बिचौलियाहरुबाटै शिक्षा क्षेत्र बिग्रेको हो। त्यस्ता बिचौलिया सत्ता परिवर्तनस“गै परिवर्तन हु“दै चाकरीवाजमा चुर्लुम्म डुबेर भ्रमजालमा पारेर फाइदा लिन्छन्। अवसरवादी चिनौं। सबैमा चेतना भया।
Previous: युवा, मदिरा र विकास
Next: छरछरेः सामाजिक अन्तरघूलनको उत्कृष्ट नमूना